FAQs - Nanchang Lijinghui Trading Co., Ltd.
Mpanamboatra ve ianao?
Eny, mpanamboatra sy orinasam-pivarotana manokana izahay amin'ny akanjo lava lehilahy sy lobaka polo 10 taona mahery.
Manao ahoana ny hatsaran'ny fitafianao?
Izahay dia manamboatra lobaka tsara kalitao misy vidiny mifaninana, manana mpiasa QC izahay hanomezana toky ny kalitaony, misy tatitra mifandraika aminay etsy ambany ary maro ny mpanjifanay miasa miaraka aminay mandritra ny taona maro.
Ahoana no ahazoako santionany aminao hanamarinana ny fotoana sy ny fotoana manokana?
Azonao atao ny manolotra anao santionany amin'ny lobaka. Azonao omena anay ny antsipirian'ny volavolanao, avy eo dia hanolotra santionany izahay isaky ny famaritana anao, na afaka mandefa santionany aminay ianao ary afaka manamboatra kaontera.
Inona no fampiasana ny fitafiantsika?
Ny fitafiantsika dia azo ampiasaina amin'ny fivarotana marika, na ampiasaina amin'ny fampiroboroboana, ary ny fanamiana ho an'ny orinasa sy ny sekoly, dia azo ampiasaina amin'ny hetsika iray ihany koa;
Inona no karazana lamba anananao?
Manana karazana fitaovana vita vita vita avy amin'ny mpamatsy lamba isika; toy ny landihazo 100%, fifangaroana polyester landihazo; ary polyester 100%;
Karazan-damba: jersey, harato, pique, volon'ondry, terry sns .. hanaiky lamina namboarina ihany koa
Serivisy Aorian'ny varotra:
Raha manana vokatra tsy mety dia azontsika atao ny mifampiraharaha amin'ny famerenam-bola amin'ny ampahany na manolo azy rehefa manaraka;
Ahoana no fomba andoavana vola
Matetika Paypal sy T / T 100% mialoha mialoha amin'ny filaharana kely; Na 30% T / T ho tahiry ho an'ny lamandy sy fandanjalanjana betsaka alohan'ny fandefasana;